Xukun dil ah oo saakay lagu fuliyay Sadex nin uu ku jiro Macalinkii Dilaaga ahaa !! | Allbanaadir.com
Home NEWS Xukun dil ah oo saakay lagu fuliyay Sadex nin uu ku jiro...
Xukun dil ah oo saakay lagu fuliyay Sadex nin uu ku jiro Macalinkii Dilaaga ahaa !!
Maxkamada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa saakay fagaaraha iskool buluusiya ku toogatay sadex nin oo lagu helay in ay katirsanaayeen kooxda Al Shabaab ee dilalka ka fulin jiray magaalada Muqdisho.
Ragan la toogtay ayaa horey muuqaal laga duubay lagu baahiyay Warbaahinta dowlada iyo baraha bulshada, waxa ayna ka sheekeeyeen dilal badan ay ka fuliyeen magaalada Muqdisho iyo qaababkii ay u dhaceen.
Xubnaha la toogtay waxaa kamid ahaa Maxamed Xaaji Axmed ( Macalin Ilkacase) oo ahaa macalin iskuul sidoo kale ahaa sargaal Al Shabaab u qaabilsanaa fulinta dilalka qorsheesan, waxaa sidoo kale la toogtay Axmed Maxamed Haashim iyo Saalim Siciid Maxamed oo la shaqeyn jiray Ilkacase.
Fagaaraha ragan saakay lagu tooganayay waxaa ku sugnaa saraakiil iyo masuuliyiin katirsan dowlada Soomaaliya si ay u daawadaan goobjoogna uga noqdaan sida xukunka loogu fulinayay ragan dilalka badan horey u fuliyay.
Fulinta xukunkan dilka ah ayaa kusoo aadaya xili habeen hore magaalada Muqdisho ka dhacay qarax ismiidaamin ah oo lagu laayay dhalinyaro badan oo waxgal ah qaarkoodna dowlada u shaqeenayeen.
Next articleMaamulka Gobolka Banaadir oo ka xumaaday Qoraal kasoo baxay Musharaxiinta Madaxweyne